Russie 2018 : Fihaonana faha-74 eo amin’i Frantsa sy Belzika ny manasa-dalàna anio -
AccueilVaovao SamihafaRussie 2018 : Fihaonana faha-74 eo amin’i Frantsa sy Belzika ny manasa-dalàna anio
Russie 2018 : Fihaonana faha-74 eo amin’i Frantsa sy Belzika ny manasa-dalàna anio
09/07/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Efa fantatra ireo ekipa efatra farany hanohy ny fiadiana ny amboara eran-tany eo amin’ny baolina kitra atao any Russie. Fihaonana faha-74 eo amin’i Frantsa sy Belzika ny manasa-dalàna voalohany izay atao any amin’ny kianjan’i Saint Pétersbourg amin’ny 10 ora alina. Tao anatin’ireo fihaonana 73 teo aloha, dia fandresena 30 no azon-dry zareo Belza, 24 ho an’ny Frantsay ary ady sahala ny 19. Ry zareo Belza araka izany no ekipam-pirenena nihaona betsaka indrindra tamin’ny frantsay. Ity anefa na izany aza ny fihaonana voalohany eo amin’i Frantsa sy Belzika taorian’ny fiandiany ny laharana faha-3 tamin’ny fiadiana ny amboara eran-tany tamin’ny taona 1986. Nivoaka mpandresy tamin’ny isa 4 no 2 ry zareo frantsay taorian’ny fanalavam-potoana.
Tao anatin’ny fiadiana ny amboara eran-tany dia resin’i Frantsa hatrany i Belzika. Ankoatra io fiadiana ny laharana faha-3 tamin’ny taona 1986 io, dia efa resin’i Frantsa (3-1) ihany koa i Belzika tamin’ny taona 1938.
Ny 7 jona 2015 no fihaonana farany teo amin’ny ekipa roa tonta tamin’ny fihaonana ara-piralahiana. Nivoaka nandresy tamin’izany tao amin’ny Kianjan’i Frantsa ry zareo Devoly mena tamin’ny 4-3.
In’enina tafakatra tamin’ny manasa-dalàna tamin’ny fiadiana ny amboara eran-tany ry zareo Frantsay taorian’ny tamin’ny 1958, 1982, 1986, 1998 ary 2006. Firenena telo ihany no nahavita tsara noho izany dia ry zareo Allemagne (12), Brésil (8) ary Italie (7).
Raha ny vinavian’ireo mpahay sy mpanaraka ny baolina kitra, dia 38% ny taha mety ahazoan’i Frantsa ny fandresena ao anatin’ny 90 minitra, raha 32% ho an’i Belzika. 30% no mety isian’ny ady sahala.
Adin’ny samy ekipam-pirenena eoropeana sisa ny fiadiana ny amboara eran-tany any Russie ity. Ankoatra an’i Frantsa sy Belzika, dia hifandona amin’ny manasa-dalàna faharoa rahampitso i Angleterre sy Croatie.